I-China izinto eziyisishiyagalombili zamagilavu ​​wokuvikela amakhemikhali namanothi ngokuningiliziwe abakhiqizi nabaphakeli | UJoysun
Izinto eziyisishiyagalombili zamagilavu ​​wokuvikela amakhemikhali namanothi ngokuningiliziwe
Amagilavu ​​wokuvikela amakhemikhali
Kuyingxenye ebaluleke kakhulu ekukhiqizeni amakhemikhali futhi kungavikela impilo yabasebenzi. Abantu abaningi bayawazi amagilavu ​​avikela amakhemikhali, kepha abazi ngokwanele ngawo. Nazi izinhlobo eziyisishiyagalombili zezinto zokuvikela amagilavu, kanye nencazelo emfushane yomqondo wazo ohlobene.
Owokuqala: i-latex yemvelo
Ngokuvamile, i-latex yemvelo inokuvikelwa okungcono kwezixazululo ezinamandla, njenge-acid ne-alkaline izixazululo ezinamandla. Izinzuzo zayo induduzo, ukuqina okuhle nokusetshenziswa okuguqukayo.
Uhlobo lwesibili: I-Nitrile
Inezinto ezinhle zokuzivikela kumafutha, i-grease, imikhiqizo ye-petrochemical, izithambisi nama-solvents ahlukahlukene. Kodwa-ke, ukuvuvukala kungenzeka kwamanye ama-solvent, kuthinte izakhiwo zawo zomzimba futhi kunciphise ukuvikelwa.
Uhlobo lwesithathu: i-polyvinyl chloride (i-PVC)
Inomphumela wokuvikela enanini elikhulu lezinto zamakhemikhali ezincibilika emanzini, njenge-acid ne-alkalis, kepha ayikwazi ukuvikela izinto eziphilayo ezinjenge-solvents, ngoba izixazululi eziningi zizoncibilikisa ama-plasticizers akuyo, angeke nje abangele ukungcola, kepha futhi kunciphisa kakhulu umsebenzi wokuvimbela wamagilavu.
Cishe ithokomele njengenjoloba yemvelo. Inokuvikelwa okuhle kwemikhiqizo ye-petrochemical kanye nama-lubricants, ingamelana nemisebe ye-ozone ne-ultraviolet, futhi inezakhiwo eziqinile zokulwa nokuguga.
Okwesihlanu: i-polyvinyl alcohol:
Inomphumela omuhle wokuvikela kuma-solvents amaningi we-organic, kepha iyancibilika kalula emanzini, futhi ukusebenza kwayo kuzoncishiswa ngemuva kokuhlangana namanzi, futhi impahla inzima futhi ayikulungeli ukuyicubungula.
Owesithupha: injoloba yokwenziwa yebutyl
Inomphumela omuhle wokuvikela kuma-organic compounds kanye nama-acid aqinile. Kunzima ukukhiqiza nokucubungula. Cishe awunawo umphumela wokuvikela kumafutha nangamafutha, kepha unezinto ezinhle kakhulu zokuvikela amagesi.
Okwesikhombisa: Irabha yeFluorine
I-polymer ene-fluorinated, i-substrate ifana ne-Teflon (polytetrafluoroethylene), futhi amandla ayo okuvula amandla aphansi, ngakho-ke amaconsi ngeke ahlale ebusweni, angavimba ukungena kwamakhemikhali. Ilusizo kakhulu kuma-solvents aqukethe i-chlorine nama-hydrocarbon anephunga elimnandi. Umphumela omuhle wokuvikela.
Owesishiyagalombili: I-polyethylene eyenziwe nge-Chlorosulfonated
Inezinto zokuvikela izinto eziningi zamakhemikhali, ingavikela ama-alkalis, uwoyela, okokubasa kanye namakhemikhali awuketshezi amaningi, futhi inokumelana okuhle namazinga okushisa aphezulu naphansi, ifaka ukumelana, i-bending resistance nokunye.
Okusetshenziswa kakhulu ikakhulukazi i-latex yemvelo, i-butyronitrile, ne-polyvinyl chloride (i-PVC) yokweluka ama-glove cores.